Ahoana ny fomba hamoronana horonan-tsary mampihomehy saribakoly sarimihetsika amin'ny tarehy | Androidsis
Androany dia miverina matanjaka kokoa noho ny hatramin'izay isika amin'ny fizarana fampiharana mahavariana ho an'ny android. Amin'ity indray mitoraka ity hampianarana azy ireo ny fomba famoronana horonan-tsary mampihomehy saribakoly sarimihetsika amin'ny endrikao. Sarimiaina mahafinaritra izay ho azontsika atao ny tehirizina tsy misy mari-drano ao amin'ny galerantsika manokana mba hahafahantsika mizara azy ireo amin'ny alàlan'ny tambajotran-tserasera rehetra, amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny fomba tianay amin'ireo fifandraisana rehetra tadiavinay.
Handray izany mivantana avy amin'ny terminal Android-nay izahay Miaraka amin'ny fisintomana rindranasa izay afaka mahazo maimaim-poana tanteraka ao amin'ny Google Play Store, fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android. Ireto ny pitsopitsony rehetra sy ny rohy mivantana hampidinana ny fampiharana apetraka.
1 Sintomy Framy - Mampifandray fotoana fohy avy amin'ny Play Store maimaim-poana
2 Inona no atolotry ny Framy - Connecting Moments ho antsika?
Sintomy Framy - Mampifandray fotoana fohy avy amin'ny Play Store maimaim-poana
Ny fangatahana resahina dia mamaly ny anaran'ny Framy - Fotoana mampifandray, ary araka ny nolazaiko, avy amin'ilay rohy izay apetako eto ambany fotsiny ireo andalana ireo dia ho afaka hanafaka azy io maimaim-poana amin'ny Android isika.
Developer: Ny sandan'ny anjara UTW TECHNOLOGY CO., LTD.
Inona no atolotry ny Framy - Connecting Moments ho antsika?
Ahoana ny fomba anehoako anao amin'ny fomba tena mahaliana amin'ny horonan-tsary mifatotra amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, horonantsary izay anoro anao anao mba hojerena rehefa asehoko anao ny fiasa tsotra sy mivantana ataon'ny fampiharana, miaraka amin'ny Framy - Fotoana mampifandray ho vitantsika ny hanao an-tsakany sy andavany, avy amin'ny terminal Android antsika manokana, horonan-tsary mampihomehy saribakoly mihetsika miaraka amin'ny tarehintsika fanatanterahana hetsika isan-karazany azon'ny mpampiasa nosoratana.
Ny tsara indrindra amin'ity rindranasa ity izay manome antsika traikefa toy ny tranonkala malaza vokyab.com, tsy toa an'ity iray ity ve, ho afaka ampidino ny horonan-tsary noforonina mivantana tamin'ny galerian'ny Android anay, tsy misy mari-drano na famantarana, hahafahana mizara izany amin'ireo namantsika rehetra amin'ny fomba heverintsika fa mety.
Miaraka amin'i Framy - mampifandray fotoana, ho fanampin'ny afaka manome endrika endrika an'ireo saribakoly noforonina tamin'ny endritsikaAmin'ny alàlan'ny fakana sary efatra samy hafa arakaraka ny toe-tsaina voalaza, dia afaka manampy mozika amin'ny tiantsika ihany koa isika na ny fahafaha-mampiasa ny sarintsika manokana ho fiavian-dahatsary hamoronana ilay horonan-tsary.
Ankoatr'izany rehetra izany, ny Framy - mpampitohy Moments dia manome antsika ny mampiavaka ny rindrina na ny Fahano hanarahana mpampiasa hafa ary hanome isa ary hanome hevitra momba ireo zavatra noforonin'izy ireo nizara mivantana tamin'ny fampiharana. Tongava inona Izy io dia tambajotra sosialy iray manontolo amin'ny horonan-tsary izay hiarahantsika mankafy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hamoronana horonan-tsary mampihomehy saribakoly sarimihetsika amin'ny endrikao
Salama ary misaotra betsaka tamin'ny anjara birikinao. Toa tsara amiko ilay hevitra fa nampidina ilay fampiharana aho ary tsy afaka misoratra anarana. Ahoana no anaovako azy?
Misy fampiharana mitovy sy mora ampiasaina.
Mampitaha Moto X Play VS Oneplus 2 sy fitsapana haingana